Watch Ben နှင့် Susie တို့သည် Wet Hot American နွေရာသီသစ်တွင်ဆယ်နှစ်အကြာတွင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့သည် - Netflix မူရင်း
Watch Ben နှင့် Susie တို့သည်စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီအသစ်တွင်ဆယ်နှစ်အကြာတွင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့သည်
စိုထိုင်းသောအမေရိကန်နွေရာသီ - ၁၀ နှစ်ကြာပြီးနောက် - ဓာတ်ပုံအကြွေး - Saeed Adyani / Netflix
avatar သည် netflix သို့လာသည့်နောက်ဆုံးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သည်
Hulu မူရင်း 'Castle Rock' သည်ဇာတ်လမ်းတွဲဇာတ်လမ်းတွဲဒါရိုက်တာဖြစ်သည် 'Rick and Morty' ပရိသတ်များသည်ယခုအခါမက်ဒေါ်နယ်၏ Szechuan ငံပြာရည်၏ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းကိုဖန်တီးနိုင်သည်
Netflix သည်ဆယ်နှစ်အကြာ Wet Hot American Summer မှသီးသန့်ကလစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Sus (Amy Poehler) နှင့် Sus (Amy Poehler) နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းတွင် Ben (Adam Scott) ပါဝင်ခဲ့သည်။
Netflix သည် Camp Firewood တွင်အတူတကွပြန်လာသည့်ဂိုဏ်း၏ပထမဆုံးကလစ်ကိုဝေမျှခဲ့သည် စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - ၁၀ နှစ်အကြာတွင်။
ယခင်က Bradley Cooper နှင့်ယခုအာဒံ Scott မှကစားခဲ့သည့်စမစ်တွင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းထားသော Amy Poehler နှင့် Ben တို့ကစားခဲ့သော Susie၊ မင်းမြင်ရမယ့်အတိုင်းဘင်ဟာသူရိုက်ထားတဲ့မူလရုပ်ရှင်နဲ့ဘယ်လိုမှမတူဘူး စခန်းပထမနေ့ , ဒါပေမယ့်သူကသူ့သွေဖည် septum ကို fix ရန်သူ၏ nosejob ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပျော်စရာ!
McKinley ပါဝင်သော Michael Ian Black သည်ဘင်နှင့်အတူ Camp Firewood သို့ပြန်လာပြီးယခုသူတို့စုံတွဲတွင်ကလေးရှိသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစစ်စစ်
သက်ဆိုင်သော: သြဂုတ်လတွင် Netflix သို့ရောက်လာသောအကောင်းဆုံးပြသမှု ၁၀ ​​ခု
၏ပထမ ဦး ဆုံးကလစ် Watch စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - ၁၀ နှစ်အကြာတွင် အောက်မှာ!
သူသည် prequel စီးရီးများတွင်ပါ ၀ င်မှုအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း၊ ဆယ်နှစ်အကြာတွင် Cooper မရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သောကြောင့်ဖန်တီးသူများက Cooper ၏ဇာတ်ကောင်ကို ပန်းခြံများနှင့်အပန်းဖြေခြင်း alum Scott ။ နှင့်အညီ, ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါဖန်တီးသူပရိသတ်ကိုaရာမျက်တောင်ခတ်နှင့်အတူ switcheroo ဆွဲထုတ်ကိုချစ်။ အဲ့လိုပဲ စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ။
ဆယ်နှစ်အကြာတွင် သြဂုတ်လ ၄ ရက်၊ သောကြာနေ့၊ စီးရီးအသစ်တွင်ဇာတ်လမ်းတွဲရှစ်ခုပါဝင်ပြီးသင်ဤစနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့နာရီများအတွင်းစောင့်ကြည့်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အလောင်းအစားပြုလုပ်ခဲ့သည်။
oitnb ရာသီ6ဇာတ်လမ်းတွဲ 2
Michael Showalter နှင့် David Wain တို့သည်ဤရုပ်ရှင်နှင့် Netflix အတွက် prequel စီးရီးများကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်ရုပ်ရှင်အတူတူဖန်တီးပြီးနောက်ဖန်တီးခဲ့သည်။
ဘို့ ဆယ်နှစ်အကြာတွင် ဒီသရုပ်ဆောင်ချက်ဟာ Cooper ကနေအတူတကွပြန်လည်စုစည်းလာတာပါ။ ဒီသောကြာနေ့မှာစီးရီးတွေပြသမယ်ဆိုရင်မျက်နှာအသစ်တွေနဲ့တွေ့ရမယ်။ စီးရီးအသစ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်၊ မူရင်းရုပ်ရှင်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုသင့်သည် စခန်းပထမနေ့ ယခုရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများသည် Netflix တွင်လည်းထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်သည်။
ချွတ်ရုပ်ရှင် get Netflix အပေါ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်မည်သို့မည်ပုံ
ရာသီ3ဖြစ်လိမ့်မည်
Bates မိုတယ်တစ် &eကိုကြည့်ပါ
bates ၏ရာသီ4ရာသီမိုတယ် netflix အပေါ်လာပါဘူး
ပင့်ကူကျမ်းပိုဒ်သို့ Netflix Spiderman
roswell (ရုပ်သံစီးရီး) ရာသီ 3